Ukuchonga iingxaki ze-Outlook
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Ukuchonga iingxaki ze-Outlook
Xa uhlangabezana neengxaki ezahlukeneyo xa usebenzisa i-Outlook yakho, unokuchonga ingxaki kwaye ufumane isisombululo.
Okokuqala, kunokwenzeka ukuba izizathu ezahlukeneyo ziya kubangela ingxaki efanayo okanye uphawu, ke kuya kufuneka ufumane esona sizathu phambi kokufumana isisombululo sayo. Izizathu eziqhelekileyo zezi:
Olunye udibaniso lwe-Outlook olungelulo lubangela ingxaki.
Ifayile yakho ye-Outlook PST yonakele okanye yonakele.
Iprofayile yakho ye-Outlook yonakele.
Ufakelo lwakho lwe-Outlook okanye uqwalaselo aluchanekanga.
Nokuba ingxaki ibangelwe sisizathu 1, ungaqala ukhubaze zonke iZongezo kwi-Outlook, ngolu hlobo lulandelayo:
Cofa "Ifayile"> "Khetha"
Kwidayalog ye-Outlook yencoko yababini, ukusuka kwicala lasekhohlo, cofa u "Faka-Ins".
Kwiwindow ephambili, cofa iqhosha u "Go" emazantsi efestile.
Kwidayalog ye-COM yokongeza i-Ins, sukukhetha zonke iZongezo, emva koko ucofe iqhosha u "Kulungile"
Vala i-Outlook uze uphinde uqhubeketart yona.
Oku kuya kukhubaza zonke iZongezo kwi-Outlook yakho. Ukuba ingxaki iyanyamalala emva kwe-restarI-Outlook, emva koko ingxaki ibangelwa sisizathu 1. Ngaphandle koko, kuya kufuneka uqhubeke nenkqubo elandelayo.
Fumana ifayile yakho ye-PST ngokulandela imiyalelo kwi eli nqaku.
Khuphela ifayile yakho ye-PST kwenye ikhompyuter ene-Outlook efakiweyo.
StarUkubonakala kwikhompyuter entsha, emva koko usebenzise u "Ifayile" -> "Vula" -> "Ifayile yeDatha yeDatha", ukuvula ifayile yePST.
Ukuba ifayile ye-PST ayinakuvulwa, okanye kukho imiyalezo enempazamo xa kuvulwa ifayile, ifayile yakho ye-PST yonakele ukuze sikwazi ukuqinisekisa ukuba ingxaki yakho ibangelwa sisizathu sesi-2, kungenjalo, ukuba ifayile yePST inokuvulwa ngaphandle kwengxaki, ke ifayile yakho ye-PST kufuneka ibe sempilweni kwaye isizathu si-3 okanye 4.
Ngesizathu 2, ungajonga eli nqaku ukulungisa ingxaki.
Isizathu 3 no-4, kuya kufuneka uqhubeke nenkqubo yohlalutyo, ngolu hlobo lulandelayo:
Yiya ku-Start Imenyu> Iphaneli yokulawula> Imeyile.
Cofa "Bonisa iinkangeleko"
Cofa "Yongeza”Ukongeza iprofayili entsha.
Kwindawo esezantsi yencoko yababini, seta inkangeleko entsha njenge "Xa starkwiMicrosoft Office Outlook, sebenzisa le nkangeleko ”
Khetha inkangeleko entsha eyenziwe, emva koko ucofe “Properties"
Yongeza ifayile ye-PST kwiprofayili entsha.
Restart Imbonakalo yakho. Ukuba ingxaki yakho ye-Outlook iyanyamalala, ke isizathu si-3 kwaye uyilungisile ingxaki yakho. Ngaphandle koko, isizathu si-4.
Ngesizathu 4, ke ufakelo lwe-Outlook aluchanekanga kwaye kuya kufuneka uphinde ufake i-Outlook okanye iOfisi yonke. Okanye ukuba unogcino lwenkqubo yakho, emva koko unokubuyisela inkqubo yakho kwindawo yogcino xa ungasebenzisa i-Outlook ngaphandle kweengxaki.